'जानी नजानी' ३ पोस्टर सार्वजनिक, हलमा चैत्र १ गतेदेखि - www.dthreeonline.com
मंगलबार, जेठ ०७, २०७६
‘जानी नजानी’ ३ पोस्टर सार्वजनिक, हलमा चैत्र १ गतेदेखि
प्रकाशित मिति: सोमबार, मंसिर १७, २०७५ समय: १५:३९:२४
ईटहरी/ चैत्र १ गतेलाई रिलिज मिति तय गर्दै फिल्म ‘जानी नजानी’को फस्टलुक पोस्टर सार्वजनिक भएको छ । सार्वजनिक पोस्टरमा फिल्मका मुख्य कलाकार मनिष श्रेष्ठ, सन्नी सिंह, नम्रता श्रेष्ठ र निरिषा बस्नेत फिचर्ड छन् ।
पोस्टरमा सबै कलाकार रोमान्टिक देखिएका छन् । बसन्त अधिकारीको डेब्यु निर्देशन रहेको फिल्म जानी नजानीमा मनिष, सन्नी, नम्रता र निरिशाको अलावा प्रकाश अधिकारी, कृष्ण भक्त महर्जन, रोशनी केसी लगायतको अभिनय रहेको छ ।
फिल्ममा सामिप्यराज तिमिल्सेनाको कथा, पटकथा तथा संवाद रहेको छ । यसै फिल्म मार्फत पुराना कलाकार तथा निर्देशक विश्व बस्नेतकी छोरी निरिशा बस्नेतले फिल्ममा डेब्यु गरेकी छिन ।
रोशनी केसीको प्रस्तुतिमा बन्ने फिल्मलाई मोदनाथ खनाल र सागर काजी मालीले निर्माण गरेका हुन् । संजय लामाले छायांकन गरेको फिल्मलाई अर्जुन जिसीले सम्पादन गरेका हुन् ।
नायिका शुभेच्छा निर्देशित ‘लक्ष्मी रानी’को छायाँकन सम्पन्न
ईटहरी/नायिका निर्माता तथा निर्देशक शुभेच्छा थापाको ‘लक्ष्मी रानी’को छायाँकन सम्पन्न भएको छ । शुभेच्छा सिने फ्रेमको प्रस्...
‘माया बस्छ कि के हो’ बाट सोनाल र कस्मताको डेब्यु
ईटहरी/ निर्देशक राजु अधिकारीको निर्देशनमा माया बस्छ कि के हो नामक फिल्म निर्माण हुने भएको छ । जनपुकार मिडिया हाउसको ब्या...
‘लभ डायरीज’मा सुशिलको सिक्सप्याक शो, रुबिना बनिन् रोमान्टिक
ईटहरी/ आउदो असोज ३ गते बाट प्रदर्शनमा आउन लागेको चलचित्र ‘लभ डायरीज’ को फर्स्टलुक पोस्टर सार्वजनिक भएको छ । माया प्रेमको...
प्रदर्सनरत फिल्म ‘जात्रै जात्रा’ युट्युबमा पर्खदै हुनुहुन्छ ? ५ वर्षपछि मात्रै युटुवमा आउने
ईटहरी/ शुक्रबारदेखि प्रर्दशन भएको फिल्म ‘जात्रै जात्रा’ पाँच वर्ष पछि युटुबमा हाल्ने निर्णय निर्माण टिमले गरेका छन् । जा...
‘प्रेम दिवस’मा आयुष्मान र विशाल संग प्रियंकाको प्रेम (ट्रेलर सहित)
ईटहरी/ जेठ ३१ गतेबाट प्रदर्शनमा आउन लागेको चलचित्र ‘प्रेम दिवस’ युट्युबमा सार्वजनिक भएको छ । प्रेम, विछोड र रोदनले भरिएक...
आजबाट सिनेमा हलमा ‘जात्रै जात्रा’, के होला त ‘बीर बिक्रम २’ को यात्रा ?
ईटहरि/ यस वर्षका दुई प्रतिक्षीत चलचित्रको रुपमा हेरिएको चलचित्र ‘जात्रै जात्रा’ र ‘बीर विक्रम २’ ले शुक्रवारबाट एकसाथ प्...
‘को बन्छ करोडपति’मा राजिबले सेटिङ्ग मिलाएर १ करोड जितेको तथ्य सहित पत्रकार दिल निशानी मगरको खुलाशा
चर्चित पत्रकार रबि लामिछानेले जिते ‘को बन्छ करोडपती’बाट यति धेरै रकम (भिडियो सहित)